Nanatrika ny fampirantiana ny laser sy ny fizotran'ny fizotran'ny fizotran'ny fizotran'ny fampiharana ny China SouthID 2017 (South China (Guangzhou) - Shenzhen Simida Intelligent Equipment Co., Ltd.
Home > News > Vaovao SMIDA
Ny SMIDA dia manatrika fampiratiana laser sy fizotran'ny fizotran'ny fizotran'ny fizaran-taona amin'ny fampiharana ny china South China (Guangzhou)
Sina atsimo, ho ivon-toeram-pamokarana sy faritra indostrialy maivana indrindra eto amin'ny firenena, dia ny indostrian'ny laser sy optoelektronika foana no nifantohan'ny. Ny atsimo atsinanana (Guangzhou) laser fampiroboroboana ary fampiratiana fampiharana dia sehatra tsara indrindra ho an'ny tsenan'ny fampiharana laser izay tsy tokony halainao.
Ny fampiratiana dia nampiseho tamin'ny fomba feno ny teknolojia famokarana laser mandroso, ao anatin'izany ny fanapahana laser, ny welding laser, ny fandavahana laser, ny fanamarihana laser, ny sokitra laser, ny laser etching, ny fanaovan-laser, ny fanamafisana ny laser, sns. ary fitaovana avo lenta toy ny robot indostrialy, tsipika famokarana mandeha ho azy, rafitry ny fahitana masinina.
Mandritra io fe-potoana io ihany, hatao ny fihaonambe teknolojia momba ny famokarana sary an-tsaina sy fampiharana teknolojia an-tsokosoko any South China 2017, izay ahitàna ny "Summit South China Laser Processing Application Summit", "International Advanced Laser Innovation Technology Forum" ary "South China Additive Manufacturing Technology Forum ". Ary ny "National Laser Safe Training Courses".
Ny firenentsika dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra amin'ny tetezamita avy amin'ny firenena mpamokatra lehibe mankany amin'ny hery mpamokatra manan-tsaina. Ny fampitaovana nentim-paharazana sy ny teknolojia famokarana dia mila fanavaozana haingana sy hiditra haingana amin'ny vanim-potoana famokarana maivana. Amin'ny maha teknolojia fandrosoana mandroso azy, ny fanodinana laser dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny toekarena nasionaly toa ny famokarana milina, fiara, fitaovana elektronika, microelectronics, metaly vy sy vy, aerospace ary indostria hafa.
Ny valan-dresaka dia mifamatotra akaiky amin'ireo fangatahana fanodinana laser ao amin'ny tsenan'i South China ,, nanasa ireo manampahaizana amin'ny laser hanana famaritana amin'ny antsipiriany momba ny fanodinana laser amin'ny famokarana fiara, ny famokarana masinina, ny famokarana bobongolo ary ny fanamboarana ny rindrambaiko ary hananganana sehatra ho an'ny fifanakalozana sy fiaraha-miasa bebe kokoa ,. Ny tatitra nataon'ny manam-pahaizana dia nandika lalina ny fivoaran'ny teknolojia fanapahana laser sy ny fironana amin'ny indostrian'ny laser, ary nitondra fifaliana audio-visual vaovao ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny indostria.